प्रचण्डको एजेन्डामा कमल थापा : चलाखीपूर्ण चुनावी फण्डा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको मुखमा आजकल एउटा थेगो थपिएको छ । २४ सै घण्टा उनको बोलीमा दोहोरयाईन्छ कि उनको दल पियोर राजाबादी र हिन्दूवादी हो । आफ्नो दल मात्रै २४ क्यारेटको राजावादी, हिन्दूवादी भएको दाबा गरेर नथाक्ने अध्यक्ष थापाले तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा पार्टी मतादेशमा बढारिएपछि फेरि नयां राजनीतिक फण्डा सुरु गरेका छन । पहिलो र दोस्रो चरणको मतादेमा मुश्किलले वीऊ जोगाएको राप्रपा अन्तिम चरणमा लगभग पत्तासाफ नै भएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै उनको नयाँ राजनीतिक फण्डा हो हिन्दुराष्ट्रका लागि जनमत संग्रह, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने राप्रपाको पछिल्लो माग दाबी ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट मंसिर १० र २१ का लागि घोषित संघीय र संसदीय चुनावका मुखमा राप्रपाबाट यस्तो माग र नारा लिएर कमल थापा राजावादी, हिन्दूवादी कित्ताको नेता र नेतृत्व बन्न कसरत गर्दैछन । कमल थापाको दलले यो माग गर्दै गर्दा एकातिर मरेको मुसालाई उपियाले छोडेजस्तो मतादेशमा उनलाई जनताले नाटकीय रुपमा छोडिरहेका छन भने उनकै दलका सेलीव्रेटीहरु अरु दलमा घरजम सार्दैछन । नायिका रेखा थापा राप्रपा प्रजातान्त्रिकतिर, गायिका कोमल वली नेकपा एमालेतिर लागेको कारण यही हो की उनी कमजोर हुदै गए आन्तरिक र बाहय दुबै रुपमा । त्यसो त एक से एक हेभीवेट नेताहरु राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा लागेर सत्तारुढ नै भैसके ।
तर यो उनको चुनावी स्टन्ट मात्रै हो, उनको राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको अंगिकार होईन । दिनैपिच्छे मै हुं २४ क्यारेटको असली राजावादी भनेर सुगा रटाई गर्नुपर्ने जुन तहको रसातलमा थापा पुगे र उनको दल फुट्यो तब नै उनको दलको कौवा चलाखीले राजनीतिक विष्टा सेवन गरिसक्यो । अब उनका दाऊ आगामी चुनावमा अरु राजावादी दल र जनमत तान्ने रणनीतिक अस्त्र मात्रै हुन पछिल्ला माग । र, यो उनको वेमौसमी राजनीतिक बाजा हो कम्तिमा यो बेला ।
दिनैपिच्छे मै हुं २४ क्यारेटको असली राजावादी भनेर सुगा रटाई गर्नुपर्ने जुन तहको रसातलमा थापा पुगे र उनको दल फुट्यो तब नै उनको दलको कौवा चलाखीले राजनीतिक विष्टा सेवन गरिसक्यो ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग राप्रपाको नीति बिपरितको माग हो । उ सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्था मान्ने दल हो, उसको पार्टी घोषणापत्र अनुसार । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दलका रुपमा विधान र नीति बनाउने अनि संसदीय व्यवस्थाले नचिन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्ने राप्रपाको यो सद्धान्तिक विचलन नै हो ।
राप्रपाले माओवादीले मागेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्धा आफै बोकेर नयाँ संस्करणको माओवादी हुन खोजेको भए के नै भन्न सकिन्छ र ? त्यसो हो भने माओवादीसँग पार्टी एकता गरे भैगयो । माओवादीसंगै एकता गर्न लाज भए पूर्वमाओवादी डा. बाबुरामको दल छर्दैछ, नयां शक्ति । राप्रपा र नयां शक्ति जब प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्धामा एक मत भएका हुन भने पार्टी एकता नै गरे भैगयो । होईन भने माओवादी र पूर्व माओवादीको मुद्धा बोक्ने र पार्टीको सैदान्तिक नीति बिपरित जाने उसको पछिल्लो निर्णय ताक परे तिवारी नत्र गोतामे शैलीको अनुशरण मात्रै हो ।
राप्रपाले यो मुद्धामा नयां शक्ति वा माओवादीको भन्दा भारी जनसमर्थन पाउने आशमा छ भने त्यो उसको सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो । किन भने जनताले प्रत्यक्ष्ँ कार्यकारीको मुद्धामा प्रचण्डको विकल्पमा कमल थापालाई साथ र भोट दिन्छन भन्ने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रचण्डको राजनीतिक मुद्धा हो भन्ने जगजाहेर छ ।
हिन्दूत्वका लागि जनमत संग्रहको राप्रपा माग पनि सत्तामा जादा चुप बस्छ, संकटका बेला चर्को रुपमा उरालिन्छ । खासमा कमल थापाको राजनीतिका लागि यो मागी खाने भांडो मात्रै बन्यो, बनाईयो ।
सिद्धान्ततः राप्रपाले यो संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गरयो । संविधान स्वीकार गरयो । संविधान अनुसार कमल थापा आफै केपी ओली र प्रचण्डको फरक फरक सरकारमा सत्तामा गए । सत्तामा जादा सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिने अनि सडकमा पुगेपछि मात्रै हिन्दूत्वको कुरा उठाउने यो राप्रपा काईदा चरम अवसरवादको उदाहरण हो । यो उसको राजनीतिक अडानको रुप होईन ।
नेपालको संबिधान, २०७२ जारी भएको २ वर्ष पुरा भएको छ । अर्थात देश विधानतः धर्म निरपेक्ष भएको यो तेस्रो वर्ष हो । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना र भावना नंया संबिधानमा समेटिन नसक्नुको मुख्य कारण तीन ठूला दल नै हुन । तर राप्रपा पनि त्यसमा दूधको साक्षी बिरालो शिवाय केही बन्न सकेन ।
यस बिचमा हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको निमित्त देशव्यापि रुपमा जनस्तरबाट निरन्तर आवाजहरु उठि रह्यो । राप्रपाले सदन र सडकमा समेत हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको पक्षमा सशक्त प्रयास नै गरेन । गरेका सबै विरोध पनि सत्ताका लागि बार्गेनिंगमा सीमित गर्यो । हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न राप्रपाले संसदमा संबिधान संशोधन विधेयक समेत दर्ता गर्यो । फगत पार्टी अडान देखाउने शैलीमा त्यो उसको देखावटी रणनीतिमा कैद भयो । फलतः काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झैं, त्यस तर्फ संसद र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कुनै चासो देखाएनन् तथा राप्रपाले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई छलफलमा समेत ल्याईएन ।
यो राप्रपाले देखावटी राजनीतिक लाभका लागि मात्रै गरेको नौटंकी थियो । उसको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठापूर्ण अडान थिएन । संविधान अनुसार सरकारमा जाने अनि संसदमा हिन्दूत्वको प्रश्ताव दर्ता गराएका भरमा हिन्दूवादी कहलिने कमल थापा सूत्र आफैमा सत्तालिप्साका लागि सिद्धान्तको स्खलन थियो । फलतः अब उनका कुरा जनताले पत्याउने दिन उनी आफैले समूल अन्त्य गरे ।
धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाल पनि योजनावद्ध र संगठित रुपले लोभलालच, त्रास र भ्रम सिर्जना गरेर लाखौं नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउने कार्य जारी रहेको भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष सही हो । यस कार्यबाट एकातिर नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सदियौदेखि नेपाली समाजमा कायम रहेको सदभाव र एकता खलबलिई देशमा धार्मिक द्धन्द बढने संभावना देखिन्छ भन्ने उसको विश्लेषण पनि सही नै हो ।
संविधान अनुसार सरकारमा जाने अनि संसदमा हिन्दूत्वको प्रश्ताव दर्ता गराएका भरमा हिन्दूवादी कहलिने कमल थापा सूत्र आफैमा सत्तालिप्साका लागि सिद्धान्तको स्खलन थियो ।
तर यस वास्तकितालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने वारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन यहि मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसंगै राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् भन्ने राप्रपा माग चाहि चुनावी नाराका लागि नक्कली हिन्दूवादीको नौटंकी मात्रै हो । र, यो चुनावमा यो कार्यान्वयन नहुने तथ्य सबैभन्दा बढी कमल थापालाई नै थाहा छ । यस मागवारे सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षित गर्न यहि असोज २३ गते सम्पुर्ण जिल्ला समदरमुकामहरुमा जुलुस र सभा गर्ने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम राप्रपाको कलाबिहिन राजनीतिक नाटक मात्रै हो । किन भने जिप्रकामा ज्ञापन बुझाएर संविधानमा हिन्दू देश लेखिन्न वा तीन दल जनमत संग्रहमा जादैन्न भन्ने पूर्वगृहमन्त्री थापालाई थाहा छ ।
संबिधान जारी भैसकेपछि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेकोप्रति राप्रपाले प्रकट गरेको चिन्ता सत्तामा जान नपाएपछिका गोहीका आशु मात्रै हुन । नंया संबिधान जारि भएको दुई वर्षभित्र तीन वटा सरकार परिवर्तन हुदा दुईटामा उही राप्रपा पुच्छर रहयो । वर्तमान देउवा सरकारले उसलाई जता मल्को उतै ढल्को गर्न नपत्याएपछि मात्रै उ विपक्षमा वाध्यताले थन्किएको हो ।
राष्ट्रप्रमुखका रुपमा आलंकारिक संबैधानिक राजसंस्था कायम गरि कार्यकारी प्रमुखका रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रि हुने व्यवस्था गर्ने राप्रपा माग संसदवादमा फसेका नेपाली वामपन्थीहरुले पार्टी विधानमा साम्यवादको लक्ष्य लेखेर छर्ने सैद्धान्तिक भ्रमको अर्को रुप मात्र हुन । गणतन्त्र स्वीकार गरेको दलबाट यस्तो माग राख्नु राजनीतिक रत्यौली मात्रै हो । यो कुरा यो संविधान कायम रहदासम्म असंभव नै छ । असंभव कुराको माग भनेको झूठो राजनीति मात्रै हो ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानियतहको निर्वाचनमा पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्ने राप्रपा माग राजनीतिक बहसको विषय हो । तर यो उसको सस्तो लोकप्रियता आर्जनको चलाखी बाहेक अरु केही होईन । यो माग पनि माओवादीको मुद्धा हो । राप्रपाले संसदवाद मानेकोले उसको मागमा यो व्यवस्था हुन संभव नै देखिदैन ।